मोरङ, २० मंसिर । रेष्टुरेन्टमा काम गर्ने महिला कामदारलाई यौनधन्दामा लगाउने विराटनगर १४ रोडशेष चोकस्थित ज्योति रेष्टुरेन्टकी सञ्चालक विराटनगर–१३ की ज्योति बराल (मण्डल) लाई अदालतले कारागार चलान गरेको छ । सो मुद्दामा प्रतिवादीबारे थप...
त्रिनारीरत्नको मूर्ति स्थापना हुने
काठमाडौं, २० मंसिर । त्रिमूर्ति निकेतनद्वारा गठित ‘त्रिनारीरत्न स्मारक’ले पूर्णता पाएको छ । स्मारकका अध्यक्षमा मोदनाथ प्रश्रित, उपाध्यक्षमा प्रा डा गार्गी शर्मा, सदस्यसचिवमा नरेन्द्रराज प्रसाई तथा सदस्यमा रामबाबु प्रसाईँ, ताना गौतम, तुलसा गौतम, नरहरि...
एमालेद्वारा सङ्गठन सुदृढीकरण अभियान
इटहरी, २० मंसिर । नेकपा (एमाले) सुनसरीले पार्टी सुदृढीकरणका लागि चारमहिने अभियानको घोषणा गरेको छ । एमालेको नवौँ महाधिवेशनले पारित गरेको सन्देशलाई नेपाली जनताका माझमा लैजान तथा जनताको बहुदलीय जनवादबाट विकास भएको राजनीतिक परिवर्तनलाई...
थिमिमा नवदुर्गा नाच नहुने
भक्तपुर, २० मङ्सिर । प्रत्येक वर्ष योमरी पूर्णिमाका दिनदेखि मध्यपुर थिमिमा सुरू हुने नवदुर्गा नाच यस वर्ष पनि सञ्चालन नहुने भएको छ । दुई वर्षअघि नवदुर्गा देवगणलाई सगुन दिने ‘द्यः व्वय्केगु’ क्रममा मध्यपुर थिमि–८,...
मकवानपुरमा गाँजा र अफिम नष्ट
हेटौँडा, २० मंसिर । मकवानपुर जिल्लाको पश्चिम भेगमा पर्ने १२ गाविसमा स्थानीय कृषकले लगाएको अवैध गाँजा र अफिमखेती प्रहरीको विशेष टोलीले आज बिहान नष्ट गरेको छ । एक सय ७० बिघामा लगाइएको गाँजा र...
यातायात आचारसंहिता पालना भएन
काठमाडौं, २० मंसिर । मुलुकका विभिन्न स्थानमा महिलामाथि भइरहेको हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना अन्त्य गर्न युवाहरुले आग्रह गरेका छन् । एक्सन एड नेपाल नामक संस्थाका आशिष विकले पछिल्लो पटक मुलुकका विभिन्न स्थानमा दाइजो,...
किराँत लिम्बू समुदायको चासोःक तङ्नाम
पाँचथर, २० मंसिर । किराँत लिम्बू समुदायको महान् पर्व चासोःक तङ्नामअन्तर्गत आज दोस्रो दिन कुलाङदाक्मामा घर सफा गरी सफा पानीले सिञ्चित गरेको दियो बाली सार्वजनिक स्थानको सरसफाइ गरिएको छ । खेतबालीमा रोपिएको अन्नबाली पाकेपछि...
कक्षा पाँचमा अध्ययनरत किशोरीको विवाहमा रोक
विराटनगर, २० मंसिर । मोरङको मोतीपुर–३ मा शुक्रबार हुन लागेको एउटा विवाह सरोकार भएकाहरुको पहलमा रोकिएको छ । स्थानीय विद्यालयमा कक्षा ५ मा अध्ययनरत १७ वर्षीया किशोरीको विवाह रोकिएको हो । ती किशोरीकी पिताको...
अस्पतालमा सुत्केरी गराउनेतर्फ आकर्षित
महोत्तरी, २० मंसिर । पश्चिमी क्षेत्रका ग्रामीण क्षेत्रका महिला अस्पतालमा सुत्केरी गराउनेतर्फ आकर्षित भएका छन् । जिल्लाको पश्चिमीवर्ती क्षेत्र गौशाला नगरपालिकालगायत भरतपुर, लक्ष्मीनियाँ, केलगाछी, औरही गाविसका ग्रामीण भेगका महिला दिनप्रतिदिन अस्पतालमा नै सुत्केरी गराउन...
राष्ट्रपतिले माथिल्लो बंगारा फेरे
काठमाडौं, २० मंसिर । महिनाअघि राखेको नक्कली दाँतमा समस्या देखिएपछि राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले शुक्रवार वीर अस्पतालमा पुगेर फेरेका छन्। वीर अस्पताल स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले बायाँतिरको माथिल्लो बंगारा फेरेको समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले...
पूर्व राजाका सचिव सबैभन्दा नजिक को ?
काठमाडौं, २० मंसिर । पूर्व राजा ज्ञनेन्द्रको भलाकुसारी गर्ने ५ सचिब छन्। ज्ञानेन्द्र शाह राजा भएदेखि नै ५ सचिबको हामलीमुहाली चन्दै आएको थियो। ती मध्ये अहिले निजी सचिब सागर तिमल्सिना र संवाद सचिब फणिराज...
विहे नै नभएकालाई श्रीमती पोइल गएको प्रश्न !
काठमाडौ, २० मंसिर । परीक्षामा सोधिने प्रश्नले विद्यार्थीको मनोभावमा ठेस पुर्‍याउनुहुन्न। यो, शैक्षिक मान्यता नै हो, तर निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशनले कक्षा १०का विद्यार्थीका लागि तयार गरेको प्रश्नपत्रमा मनोभावमा मात्रै ठेस पुर्‍याएन, छात्रलाई...
« 1 … 6,180 6,181 6,182 6,183 6,184 … 6,645 »